Saron-tava, Hopitaly marary, fandriana hopitaly - JBH Medical
Tongasoa eto Anhui JBH Medical
Vakio ity mba hahalalanao anay!
Anhui JBH Medical Apparatus Co, LTD dia nanangana ny taona 2013.with 7 orinasa orinasa ary manana toeram-pamokarana maoderina vita amin'ny 78000 hektara. Orinasa mpamokatra orinasa miaraka amin'ny fampidirana ny R&D sy ny ekipa marketing iraisampirenena, izay manana ny vokatra noforonina manokana ary koa ny vokatra ODM amin'ny fanatanterahana ny tsen'izao tontolo izao, manana mpiasa 500 mahery amin'ny renivohitra voasoratra anarana mihoatra ny 12 tapitrisa USD. Ny vokatra lehibe dia ny fandriana hopitaly manan-talenta, ny fiakaran'ny marary, ny saron-tava fiarovana ary ny fitaovana hafa mifandraika amin'ny fitsaboana. Nankatoavin'ny rafitra kalitao iraisam-pirenena, ISO 9001, ISO14001, ISO 13485 ary napetraka ny laboratoara voamarina SGS, raha toa ka voamarina amin'ny FDA, CE, ary CFDA ny vokatra, varotra firenena 70. Nihazakazaka sy nandroso nankany amin'ny fahombiazana isika tamim-pahatsorana, fifaliana ary fankasitrahana.
Fa maninona no misafidy Anhui JBH Medical?
Ny vokatra dia mahafeno ny fenitra ISO, CE ary FDA. Vokatra voaingoana. Orinasa mpamokatra ara-dalàna SGS.
Ekipa mikarakara mpanjifa feno fiofanana, vonona hamaly ny fanontanianao rehetra.
Mihazona ny vidin'ny fomba fanaraha-maso kalitao izahay.
Manao fanamby daholo izahay, tsy misy fitarainana. Tsy miala sasatra amin'ny fahafinaretana velively isika.
Fandriana fikarakarana trano elektrika ho an'ny olona sembana 1.V ....
Toeram-pandriana hopitaly ho an'ny olona sembana ...
3 sosona, FDA, CE nankatoavina Sarontava azo ampiasaina ...
FDA, CE nankatoavina modely: JBHF001 Disposa ...
Size ankapobeny 1110 * 640 * 1480mm adidy Cycl ...
Habeany 1510 * 735 * 1460 mm Duty Cyc ...
Takelaka fanamaintina Ny firafitry ny kasa ...
fanoloana fanaraha-maso lavitra ny fandriana hopitaly, fandriana marary hopitaly, fandriana fitaterana asa, fandriana hopitaly mandeha môtô, sarontava vava, saron-tava azo esorina amin'ny Internet,
fandriana fitaterana asa, fanoloana fanaraha-maso lavitra ny fandriana hopitaly, saron-tava azo esorina amin'ny Internet, sarontava vava, fandriana hopitaly mandeha môtô, fandriana marary hopitaly,